Singabona iimveliso ze-HONGSBELT apha naphaya, kubandakanywa nokugcinwa kunye nokuhanjiswa. Iindidi ezili-1500 zezisombululo zinokubonelelwa kubathengi bethu. Amaziko okugcina impahla kunye nokuhanjiswa afuna iindlela ezifanelekileyo, ezithembekileyo zokuphatha izinto eziphathekayo ezinokusingatha iintlobo ngeentlobo...
I-HS-2000A imodyuli yemodyuli eguquguqukayo ephezulu, iphandwe ngokuzimeleyo kwaye yaphuhliswa ngu-HONGSBELT, yimveliso enelungelo elilodwa lomenzi waseTshayina. Iyilwe yimodyuli yebhanti yesakhiwo kwaye iqhutywa yi-sprocket, ithintela ukusilela kokutyibilika, inokugcina ...
I-HONGSBELT ibhanti yeplastiki yemodyuli esetyenziselwa kwisikhululo seenqwelo-moya ukuthutha imithwalo.Exhotywe ngolwazi kunye nobuchule, i-Hong's Belt ibekwe ukuphuhlisa izisombululo ezijongene nemingeni emikhulu yabathengi. Ibhanti yaseHong iya kuba ngumthengisi othembekileyo we-conveyance soluti...